Soomaali ka cabanaysa balan qaad shaqo oo looga baxay | Somaliska
Soomaali ka cabanaysa balan qaad shaqo oo looga baxay
Isbuucii hore waxaa ila soo xiriiray nin Soomaaliyeed oo ii sheegay in balan qaad shaqo ay u sameysay shirkada dhulka nadiifisa ee Stockholm. Waxa uu sheegay in iyaga oo gaaraya 450 qof oo Soomaali u badan ay bilaabeen praktik bishii April iyagoo loo balan qaaday haddii ay si hufan ay hawsha u qabtaan in shaqo la siinayo 3 bilood ka dib.
Hadaba sida uu sheegay arintaas ayaan waxba ka soo caanasaan oo markii sadex bilood dhamaatay ayaa la qaatay 5 qof oo keliya halka intii kale loo sheegay in aan waxba loo heyn. Mar aan isku dayay in aan la xiriiro cida uu ka eedsheeganayo ninkaan ayaysan ii suurto galin in aan xiriir la sameeyo.
Si kastaba ha ahaatee, ninkaan ayaa sidoo kale sheegay in uu jiro nin Soomaali ah oo ragaan wax isdaba marin ku sameeyay oo shirkada la shaqeeya. Mar uu ka hadlaayay arintaas ayuu yiri “Arintani waxaa ku lug leh nin somali ah oo aanan aqoonin qiimaha ay leeyihiin walaalihiis oo na iibsaday ”
Arintaan ayaan ahayn mid ku cusub Soomaalida Sweden oo meel kasta oo ay joogaan shaqo la,aantu haysato isla markaana cabasho badan ka muujiya in shaqooyinka baraatiiga ee ay sameeyaan aysan wax shaqo ah u sahlin. Sidoo kale waxaa dhici karta in isfahandaro ay jirto oo markii horeba aan wax balan qaad ah la sameynin. Shirkada 450 qof shaqo u balan qaaday iyada ayaaba wadanka oo dhan shaqaaleyn karta.
Ad ayaan uga xumahay ninkaas walaalkeen inay sidaa kudhacday lakin waxaan kudhihi laha haka niyad jabin shaqo raadintadii ee sidaa kusii wad insha Allah Ilahay ayaa kusiin doona midaad kufaraxdo.
Dadaala wa uu gaara sabraana sadkii hela ee walaal dadaalkaga shaqo raadin halkaa kasii wad.
Mida kale inta badan dadka swedishka ah markay dadka praktik noo sameeya leeyihiin mabalan qaadan shaqo ee waxaa laga yaaba ama dhacdo marmarka qaar dadka shaqada bixiya iyo kuwa shaqada radiya inay dad udhexeeyan oo isfahan waa kayimaado dhexdooda.
Marka hore wax hala barto iskuulada hala aado ama xifad si shaqo fican loo helo
asc arinta walaalkeen uu ka hadley waa arin jirta waana wax nagu cusub hadaan nahey dadka ku cusub wadankaan in aad ku shahqeyso bilaa mushaar taasna markii aan weydiiyey dadkii iga soo horeeyey ay ii shegen iney wadato barnaamijkan loogu faaiideynaayo dadka taajiriinta ah oo shirkadaha iyo meel walbo oo ganacsi ah ay u furan tahey waa wan subag sii kkkk aniga waxaa la ii direy practik laba bil iyo bar ah shirkad wax nadiifin ah nasiib wanaag waxan helay wiil soomaliyeed oo ka shaqeeyo luqadana wan barta balse english ayan si wanagsan u aqaanaa ileyn adunku waa is fahane markey 15 beri iiga harsan tahey ayaa waxa fasax qaatey wiilki somaliga ahaa una sheegey in aan si wanaagsan u shaqeeyo oo waqtigana illaaliya howsheydana aan kasoo bixi karo waxeyna waa nagtii kaaba shaqaalaha ka eheyd ay ii balan qaadey in aan aniga labada bilood uu maqan yahey aan sii wado howsha waxa kale oo jirey wiil somaliyeed oo asagana iga soo horeeyey ilaa afar bil ka praktigeeyey lkn uu ahaa nin xiliguu doono imaado maqnashihiisana uu badnaa maalintii uu baxey ayey naagta isoo wacdey iina sheegtey in aan berito howshii sideedii aan u sii wado beritana quraaacda ka dib aan kulmeyno waxeyna igu tiri adiga waxan kusiiyey hal asbuuc sababtoo ah waxa jira wiil swedish ah oo adiga kaaga xaq leh oo aan u yeerano markii bosbanaan ay jirto anigana ok ayan dhahey markaan dhameystey asbuucii ayaa lagu wareejiyey ninkii kale xitaa ma yaqano meel laga bilaabaya aniga ayey waxey igu tiri waa inaad cawisaa o kala bartaa sida shaqadu tahey waxa hadane fasax qaatey naag meesha ka shaqeyso anigana goortas praktiigii wuu ii dhamaadey wey isoo wacdey waxeyna i dhahdey labo maalin marabtaa haa ayan dhahey waana aadey wiilkii swedishka ayaa wuxuu ii sheegey in naagta madaxda macruufo ay yihiin oo aqoon fiican ay ka dhexeyso la aanteedna uusan halkaan ka shaqeeyeen hada shaqadaan aniga leygu wacey ay isaga ka codsatey walaalkiis ka yar in la keeno lkn wallaalkii ayaa iska diidey sidaas ayaa adiga laguugu wacey marka wallalayaal swedishkii ayaaba baahanee xagee anaga joognaa hadana waxan go aansadey hadii ay idhahan laba beri marabtaa inaan maya ugu jawaabo waayo mar hadii lagaa goosanaayo wixii aad soo heshid ama shaqo ugu yaraan 6 bilood ah isiiya ama iga daaya wad mahadsan tihiin
July 28, 2011 at 15:52
ASC walaalayaal arintani aniga way igu dhacday laakiin waxaan ka baqayaa in sida aniga la iigu siray in loogu siro walaalo kale ee soomaliyeed mita kale hadii lagu dhaho waxaad tahay praktik waa ok waad ogtahay waxaad ujoogtid meesha laakiin hadii laguu balanqaado shaqo waa in laga soo baxaa marka aniga waxa igu dhacay ilaahay ayaan ka sugayaa wax kafiican mar walba ALLAAH WAA INAAN KU MAHDINAA asc
War Dadoow Wax Hala Barto ,
Haddii aad Doonee Shaqo ,
Wanaagsan oo Caafimaadkaaga U Roon Wax Hala Barto.
July 28, 2011 at 23:44
Waan idin wada salaamay dhamaan walaalaha akhrista somaliska , Hadii aan u gudo galo Run ahaan tii wadankaan aan ku noolnahay ee Sweden, ma ahan wadan shaqo looga helo waan garanayaa ama waan soo sameeyey, wax walbo waxaa laguugu xerayaa xirfad ma u leedahay shahaadana ma wadataa iyo halkeed ka soo shaqeeysay. Laakiin Soomaalideena marna mala qabsan karno nidaamka ama habka loohu dhaqmo wadankan, wax walbo anaga ayaa iska dhaadhicineyno sida aan anaga u rabno laakiin maku xisaabtameyno sida ay ayaga naga rabaan. Run ahaantii waa inaad iska gedi kartaameesha aad shaqada ka rabtid opo aad qancin kartaa ninka aad shaqada ka rabtid, dhinac waliba xitaa habka aad u labisan tahay dharkaaga iyo habka aad u hadleysid. Laakiin Anaga hadii aan Soomaali nahay waxaan rabnaa oo keliya shaqo wax macquulna ma aha waxaan rabaa shaqo, waxaa kaloo jira inuu qofta haysto CV iyo Pesonlig brev waxa loo yahay warqada adiga kaa hadleysa iyo shahaadooyinkaaga. Marka waxaan walaalaheyga aan jeclahay ku waanin laha labo shey oo kala ah, 1- Afka Sweden si fiican u barta . 2- Xirfad aad ku shaeysataan barta. 3- Bulshadana dhex gala hadii aan anaga oo soomaali isku koobnaano waxba maka fahmeyno wadankaan Sweden. Walaalayaan hadii aan qaldamay iska keey cafiya .
July 29, 2011 at 03:06
Horta mid ogaadha shaqada waxaaka horeeyso in lagu barto misna lagugu qanco baraktika macnahiisu waxaa waaye baroobo lkn somalida waxeey dhib ku qabaan oo an uga duwanahay umadaha kale balamaha iyo waqtiga tel-ex hadii lagugula balamo
vid ett ma,ahin inaad soo mutursato 2 el över sababta loo qaadtay 5–taas nin oo looga tagay kobada kalena waxaan aaminsanahay ineey saas sabab u tahay. yaana laga daalin codsiga waraqaha aniga hadaan diro 30 warqad oo 300 sek frimärke iyo brev iga gasho aa 1 ama 2 leygaga so jawabaa waxaana leey dhahaa tyvärr ingen tjänst ledighet nuvarande wlh kalmadaas weeyga hortimid maxaa looga daray svesnka ay iga joogtaa dadal dheer kadib hada waxan helay sommarjobb ALAA MAHAD LEH IYO INTI GACAN KAGEEYSATAY ,
Tan kale oo ah nin somali ah oo shirkada u shaqeeyo aa wax is deba marshay ma umaleynaayo somalida u shaqeeyso shirkadaha ineey xaasidnimo intaas la,eg sameeynaayaan waliba dadka cusub kaalmo ay ugalaan hadeey ahaa leheed gadaal kariix iyo hala baroobeeyo qoftaan nasiiib wacan alla
July 29, 2011 at 19:17
Walaaal waxaa ka codsan lahaa bahda somaliska in war bixin kasta oo lasoo qoro in hoos lagu soo qoro qofka soo diyaariye warbixinta magaciisa maxaa kaloo ka codsan lahaa in waxa lasoo qoraayo inee ahadaan wax sax ah oo lahubo warbixintaan waxee cadeeneesa in eesan eheen wax lahubo hadii aan somali nahay aad ayaan uhadal banahnay waxyaabo badan oo anaga xageena ka alifano ayaa jiraan. Marka bahda somaliska aad iyo aad ugu mahadsantihiin shaqada aad uheesaan umada somaliyeed ee ku nool wadanka sweden.
July 29, 2011 at 19:23
iga raali noqo walaal magaca hada ayaan arkay hoos ayaa ka raadinaaye badanaa marki warbixin ladiyariyo hoos ayaa magaca lagu qori jiray marka maskaxda aa saaas ayaan ubartayt !!!
hadii wadankii hoyo la jogilaha qofna mayelen ino dhul fiiqid ama xaaqid inab isdu u yaqan we qofna ma yeeleen san hubo iminkana waba fara kula bood